AIRTEL M’LAY Nampahafantarina ireo mponina ao Toamasina
Taorian’Antananarivo dia nampahafantarina an’ireo mponina ao Toamasina indray ny fisian’ilay tolotra Airtel M’lay, karakarain’ny orinasam-pifandraisana Airtel.
Filaharam-be namakivaky ny tanànan’i Toamasina niarahana tamin’ireo posiposy no nisantarana ny hetsika izay nahavory olona marobe tokoa. Ny hahafahan’ny mpanjifa rehetra mifandray am-po amin’ireo fianakaviany, ny olon-tiany ary ireo namany akaiky no tanjon’ny Airtel hametrahana indray ny fihavanana Malagasy zary tsy hita taratra intsony tato ho ato noho ny hasarotan’ny fiainana. Tsiahivina fa raha mampiditra fahana 2.000 Ar ny mpanjifa iray dia afaka miantso mandritra ny roa andro, manana 200 minitra tsy an-kiato. Raha mividy fahana 500 na 1.000 Ar kosa ny mpanjifa iray dia afaka miantso mandritra ny 24 ora miankina amin’ny fotoana hampiasany azy. Mbola hitohy any Mahajanga sy Toliara ny hetsika.